Ejypta: Mpanao gazety iray hafa voaroaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2019 7:08 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Türkçe, English
Mba hanohizana ireo andiana fanorisorenana na fandroahana mpanao gazety any Ejipta, tahaka an'i Travis Randall, Philip Rizk sy Wael Abbas; dia notazonina tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Cairo taorian'ny nahatongavany i Per Bjorklund, mpanao gazety Soedoà sady bilaogera. Nosakanan'ny polisy izy ary naverina tany Prague tsy misy fanazavana; nolazaina taminy fotsiny fa “ao anatin'ny solosaina ny anaranao.”
Heverina ho iray amin'ireo mpanao gazety vahiny mavitrika indrindra mitantara momba ny habetsaky ny fitokonan'ny mpiasa Ejypsiana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny gazety Soedoà maromaro ary koa ireo tranonkala mpikatroka tahaka ny Electronic Intifada i Per. Manoratra ao amin'ny bilaoginy Egypt and Beyond ihany koa izy, izay manoritra ny tenany ho:
Mpanao gazety mahaleo tena mipetraka ao Cairo. Mitantara ny tolona isan'andro hisian'ny Ejiptiana iray hafa sy ny Afovoany Atsinanana iray hafa, izay matetika loatra no tsy hita ao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Hossam El Hamalawy, iray amin'ireo voalohany namoaka ny vaovao:
Nosakanana ilay mpanao gazety Soedoà sady bilaogera Per Bjorklund teo amin'ny antsasakadiny lasa izay tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Cairo. Nilaza taminy ny polisy misahana ny fifindra-monina fa “ao anatin'ny solosaina ny anarany”, araka ny filazan'i Per, izay noresahako tamin'ny telefaonina minitra vitsivitsy lasa izay.
Tao amin'ny efitrano iray tao amin'ny seranam-piaramanidina, izay misy olona hafa i Per, ary miandry fanazavana avy amin'ny polisy.
Mpanao gazety vahiny iray hafa, James Buck naneho hevitra tao amin'ny bilaoginy Journalism not a crime:
Mpanao gazety mahafinaritra izay nanampy ahy ho tafiditra tsara amin'i Ejipta i Per. Tahaka ny hoe nanapa-kevitra i Cairo hanakana ireo mpanao gazety tsy mitovy hevitra aminy tsy hiditra ny firenena. Fihemorana goavana ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ity.
Tamin'ny fanamarihana hafa, mpanao gazety Ejyptiana sady bilaogera, Scarr, namoaka lahatsoratra mampihetsi-po mikasika ny lafiny iray amin'ny tantara.
Iray tamin'ireo olona nandray anjara tamin'ny diaben'i Gaza – tahaka an'i Travis Randall – i Per saingy vahiny maro hafa tao amin'io diabe io no niditra sy nivoaka an'i Ejypta tsy nanana olana. Tsia, tsy misy ny drafitra lehibe. Izany (“ao amin'ny solosainay ny anaranao”) dia ohatra iray hafa amin'ny zavatra ataon'izy ireo: fampijaliana afenina tahaka ny asa birao, toy ny politika nosaintsainina.
Miresaka momba ny sipan'i Per, nilaza izy hoe:
Ny antso farany azoko tamin'ity toe-javatra mampalahelo ity dia ora iray lasa izay, raha niantso ahy i A, mbola any amin'ny seranam-piaramanidina. Tsy nisy olona nieritreritra ny hilaza taminy fa noroahina i Per (na farafaharatsiny nilaza fa horoahina izy. Novonoina ny findainy taorian'ny niresahan'i Hamalawy taminy). Niandry teo izy, irery, tamin'izay fotoana izay. Latsa-dranomaso izy.
Ireo sioka voalohany momba ny fitazonana an'i Per.
Bilaogera Ejiptiana, Mostafa, nanontany raha toa marika ho an'ny fepetra vaovao noraisin'ny governemanta ho an'ny mpanao gazety ny fisian'ireo tranga miverimberina :
Mpanao gazety mahery fo i Per ary matetika ahitan-javatra maro ny fampahalalam-baovao soratany. Tsara fanahy izy. Tena manafintohina sy mampalahelo ny zava-mitranga. Manontany tena aho raha miezaka mampihena ny isan'ny mpanao gazety vahiny ity governemanta adala ity ho fitsinjovana ny roa taona manaraka.
Misy antsipiriany bebe kokoa hita ao amin'ny lahatsoratr'i Joseph Mayton ao amin'ny Bikya Masr sy Zeinobia ao amin'ny Egyptian Chronicles.